I-Veda Arc (I-Villa Kanokusho enechibi langasese)
I-i-bungalow ephelele ibungazwe ngu-Ashwini
I-Eldeco Towne iyimizuzu engu-20 nje ukusuka e-Hazratganj kanye nemizuzu eyi-10 ukushayela usuka e-Kapoorthala, indawo eshisayo yedolobha. Ifinyeleleka kalula yizo zonke izinhlobo zezithuthi zomphakathi kanye nokuthutha ngaso sonke isikhathi kwengeza inani endaweni ekuyo.
Ama-Posh colonies afana ne-Aliganj, i-Jankipuram, i-Priyadarshini eduzane.
Ukufinyelela kwamahhala okucacile nokuminyene kusuka e-Aliganj ngomgwaqo omkhulu waseSitapur.
Ibekwe ngendlela efanele ku-150 Mt. wide IIM Ring Road oxhuma u-Sitapur Road kanye no-Hardoi Road.
I-Eldeco Towne iyindawo yokuhlala eyakhiwe ngabakwa-Eldeco Builders & Developers Ltd. eziqhenya ngezinsiza nezinsiza ezisezingeni lomhlaba. Umphakathi onesango onomgwaqo onezinsimbi ezikhanyiswe kahle, ukuphepha okungu-24 x 7, ukuhlinzekwa kwamanzi, ukusekela ugesi, indawo yokudlala yezingane kanye nepaki yabantu abadala, indawo yokubhukuda kanye nekilabhu yokungcebeleka ehlomele kahle. uhlaza oluhle lwezwe nokunye.
Le villa eyi-4000 Sqft 2 level villa inamakamelo okulala ama-4 anegumbi lokugezela elinamathiselwe, indawo yokuhlala, yokudlela, indawo yokwamukela izivakashi kanye nekhishi elijwayelekile. Esitezi esiphezulu kukhona negumbi lokulala elilodwa, igumbi lokugezela eligcwele, ingadi ye-terrace kanye nedamu lokubhukuda.
I-Villa ifakwe ngokugcwele ama-air conditioners ahlukanisiwe, imibhede yosayizi wenkosi, umatilasi oqinile, imicamelo, ama-cushion, ama-comforters, amawodilobhu, i-LED TV, i-Router, abalandeli, iziphephetha-moya, ifriji, izitsha, izitsha, izinto zasekhishini, igesi & isishisi, itafula le-laptop elisebenzayo, Izihlalo, amatafula okudlela, igiza, amakhethini.
5 osofa, Omatolasi abangu-1
Kuzimele ngaphandle phezu kwesakhiwo i-pool
0.5 Km - I-Indian Institute of Management Lucknow
1.0 Km - Bhithauli Crossing Lucknow - Sitapur Road
8.0 KM - Dubagga Crossing Lucknow - Hardoi Road
1.0 KM - Jankipuram
2.0 KM - Aliganj
9.0 KM - Isiteshi Sesitimela sase-Badshah Nagar
9.0 KM - IT Chauraha Metro Station
30 0 KM - Isikhumulo sezindiza
Ngeminye imibuzo sicela uthinte